5 mavhidhiyo matsva kutora mukana weApple Watch | Ndinobva mac
Apple ichangotanga maminetsi mashoma apfuura 5 mavhidhiyo matsva pane yepamutemo YouTube chiteshi muSpain, umo mavanotiratidza maitiro ekuwana zvakawanda kubva mukushanda kwewachi. Ichokwadi ndechekuti zvakanaka kwazvo kuti Apple inoburitsa aya marudzi emavhidhiyo kune vanhu vangotenga Apple Watch kekutanga.
Zviripachena kuti aya mabasa anoshandiswa nevashandisi vemberi, asi sekutaura kwedu kunogara kuchishanda yevashandisi vatsva. Muchiitiko ichi, pane mavhidhiyo mapfupi mashanu mavanotiratidza akati wandei mashandiro, pakati pedu patinotarisisa maitiro emahara, iyo Walkie-talkie basa uye kutsvaga iyo iPhone, asi pane zvimwe.
Yokutanga yemavhidhiyo ndiyo inotiratidza kuti tingaite sei gadzirisa zviso zvekutarisa. Mune ino kesi, iri vhidhiyo reanopfuura anopfuura makumi matatu masekondi mavanotiratidza sarudzo dzekugadzirisa muApple Watch Series 3 mabhora, kunyangwe ichinyatso shandira mamwe ese majaira:
Imwe yemavhidhiyo atinogona kuona muSpanish yakakwana uye yakakwana ndeiya mashandisiro anoita walkie-talkie basa. Iyi ficha haina kunyanyo shandiswa nevazhinji vedu, asi ichokwadi inoshanda kune vamwe vashandisi:
Iwo mavhidhiyo anonakidza zvine chekuita nekushandisa kwewachi uye zvinotevera zvinotiratidza sarudzo dzatinadzo dzekugadzirisa data rekudzidzisa. Iyi haisi sarudzo inogadzirisika, asi ine dzimwe sarudzo dzatinogona kugadzirisa:
Maitiro ekutsvaga iyo iPhone nezwi ndidzo vhidhiyo inotevera iri nezve. Ichi chinhu chinonakidza icho ini pachangu ndinoshandisa zvishoma pamba kana ndisingakwanise kuwana yangu iPhone:
Uye kupedzisa Apple inotidzidzisa sei kuyerera Apple Music. Ichi chikamu chinogumira sevashandisi chete vane kunyorera kumasevhisi sevhisi vanogona kuchishandisa, asi zvakanaka kuti uzive kuti zvinoshanda sei
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 5 mavhidhiyo matsva kuti uwane zvakanakisa kubva kuApple Watch yako
BlackMagic Pro eGPU inoonekwa uye inonyangarika kubva kuApple Chitoro
Beta yechitatu yeMacOS Mojave 10.14.4 vagadziri vava kuwanikwa